The One That Got Away - SoLene_7 - Wattpad
29.8K Reads 3.4K Votes 16 Part Story
By SoLene_7 Ongoing - Updated May 16, 2017
kristine_marshell Jun 29, 2016
The one that got away!!!I luv that song & also ur fic eonni ^_^ fighting!!
babytaolay Jan 11, 2016
အရမ်းကောင်းတယ် plot ကတစ်မျိုးလေး အရမ်းမိုက်တယ် အ
SoLene_7 Jan 10, 2016
@shwewarpwint မျှော်နေပါရှင် tmrဒိတ်မှာပါ
SoLene_7 Jan 09, 2016
စိတိ ရှည်ပါချစ် ရဲ့
RainbowHunHan Jan 09, 2016
long? ? ? အာ့ဆို မြန်​မြန်​ဒိတ်​​နော်​ အပ်​ပုဒိတ်​မကြာ​စေနဲ့ ! ဒီလူက စိတ်​မရှည်​တတ်​လို့ ခိခိ XD
SoLene_7 Jan 03, 2016
@AzOz71 သိပ်မ စောင့်ရပါဘူး
~ Your Breeze ~
16.3K 1.6K 58
Title - Your Breeze
Casts - Sehun,Luhan
Genre - Romance,Comedy,Angst
Style - Boys Love , Fan Fiction
Lu ရယ် ... တကယ်တော့ ငါကလေ မင်းဘေးနား လေပြေလေးသက်သက်လို ရှိနေခွင့်ရဖို့ပဲ မိုက်မိုက်မဲမဲ ဆုတောင်းခဲ့ဖူးသူပါ ...
66K 7.2K 636
32.4K 3.1K 199
30.5K 3.1K 87
37.6K 3.9K 137
28.5K 3.2K 118
22.2K 1.8K 86
Main Casts : Sehun, Luhan
Supporting Casts : Baek Hyun, Kai
36K 4.1K 176
93.5K 9.2K 338
love witness [Completed]
29.1K 2K 28
အဲ့ ဒါက ပြောင်းလဲလို့မရတဲ့ လောက သဘာဝတစ်ခုဆိုတာ သူတို့သိခဲ့မယ်ဆိုရင်......